Banki cusub ah oo maanta laga furay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Banki cusub ah oo maanta laga furay Muqdisho
Mareeg.com: Banki Caalaami ah oo loogu magaac daray International Bank of Somalia ayaa manta looga dhawaaqay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta xariga ka jaray bankigaas caalamiga ah oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan (IBS) kaas oo ku shaqeyn doona shuruucda u yaalla Bankiyada adduunka.
Munaasabad xariga looga jarayay bankiga oo ka dhacday xarunta ugu weyn oo ku taalla degmada Xamarweyne ee gobalka Benaadir ayaa waxa goob joog ka ahaa, Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska, Wasiiru dowlaha Maaliyadda, Guddoomiye ku-xigeenka Bankiga dhexe ee Soomaaliya, guddoomiyaha gobalka Benaadir, guddoomiyaha Hey’adda Culimada Soomaaliyeed, rugta ganacsiga Soomaaliyeed, ganacsato iyo marti sharaf kale.
Bankiga oo ah banki Islaami ah ayaa ka hor inta aanu Madaxweynuhu xariga ka jirin waxaa lagu soo wareejiyay qeybaha uu ka kooban yahay Bankigan.
Mas’uuliyiintii ka hadashay xafladda waxa ay ku amaaneen ganacsatadii furtay Bakigan oo Soomaali ah in ay yihiin kuwa ku dayasha mudan, maadaama ay keeneen bankigii ugu horeeyay ee qaab caalami ah u shaqeynaya.
Maamulka guud ee bankiga caalamiga ah ee Soomaaliya “IBS” oo goobta hadal ka jeediyay ayaa tilmaamay in Bankiga abaabulkiisa ay lahaayeen Ganacsata Soomaliyeed, isla markaana uu la jaan qaadi doono habka caalamka, isaga oo daaha ka rogay in Bankigu uu leeyahay “Swift Code” oo ah habka ay ku xariiraan bankiyadu.
Waxa uu intaa raaciyay in ruuxii lacagtiisa dhigta uu faa’iido ku helayo, sidoo kalana bankigu uu LC u sameyn doono ganacsatada, uuna xoogga saari doono, horumarinta ilaha dhaqaale ee dalka sida beeraha iyo xoolaha isla markaana uu sameyn doono maalgelin mashruucyada loola yimaado hadii ay ahaan laheyd mid shaqsi wato ama shirkadeed, sidoo kalena uu hirgeli doono waxa loo yaqaanno “Micro Finance” si dadka danta yar fursado ay u helaan.
Guddoomiyaha Gobolka Benaadir Xasan Maxamed Xuseen “Muungaab” ayaa sheegay in tani ay qeyb ka tahay maalgashiga dalka, isla markaana ay garteen ganacsatada in hantidooda ay dalka keenaan, bedelkii ay dalal kale geyn lahaayeen.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horeyn xarigga ka jaray bankiga cusub ayaa waxa uu ku booriyay Soomaalida lacagtoodu taallo bankiyada caalamka in ay u soo dhiibaan Bankigan cusub, si bankiga ay ugu sahlanaato in uu maalgelin dalka ku sameeyo.
Bankiyada gaarka loo leeyahay ayaa kusoo badanaya magaalada Muqdisho, iyadoo ay horay u jireen Bankiyo qabta adeegyo xadidan.
Madaxweyne Xasan oo la filayo inuu gaaro Baraawe